Waxyaabaha badan ee isbeddelaa, waxay sii ahaanayaan sidii hore. Jean-Baptiste Alphonse Karr Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan baraha bulshada: uma baahnid inaad xijaab xirto. Waad nuugi kartaa wax kasta wakhti kasta ama wakhti kasta sida dhacaya inta lagu jiro xilliyadan 'COVID-19'. Faafida waxay aagag gaar ah u keentay feejignaan fiiqan, fiiqay dhinacyada geesaha leh, ballaadhinaya jahawareerka, isla mar ahaantaana, kala furfurtay meelaha qaarkood. Musqulaha sida dhakhaatiirta, shaqaalaha caafimaadka, iyo kuwa
Arbacada, February 28, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Khibradda macaamiisha macaamiishu waxay yeelan doonaan saameyn aad u weyn haddii loo haysto iyo haddii kale inay sii hayaan macmiil ahaan iyo haddii ay kor u qaadi karaan. Qabashada isticmaalka arjiga waa dariiq muhiim ah oo tan lagu sameeyo. Haddii aad tahay meherad tafaariiqeed, ganacsi, ama adeeg - dib u eegis, soo celin, gudbinno, wicitaanno, iyo soo noqnoqoshada kharashka ayaa ku siin kara xog aan caadi ahayn oo saadaalin kara dhaqanka iibsiga. Tani aad ayey muhiim ugu tahay ganacsiga. Inta anshaxa macaamiishaada